क्रिकेट Archives | Page 181 of 255 |
नेपाललाई ठूलो झड्का , कप्तान पारस खड्का ४२ रनमा अाउट
२०७४, २९ माघ सोमबार १८:४५ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत केन्याले दिएकोे १७८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टिमलाई चौथो झड्का लागेको छ । खेलको १८ अौ अोभरमा कप्तान पारस खड्का ४२ बनाउदै अाउट भए । उनले अघिल्लो खेलमा युएई बिरुद्ध पनि ५१…
कप्तानि पारी खेल्दै पारस खड्का , के जित दिलाउछन् त ?
२०७४, २९ माघ सोमबार १८:३१ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत केन्याले दिएकोे १७८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टिम खराब सुरुवात गरेको छ । १४ रनमा नै तिन विकेट गुमाएको नेपाली टिमलाई अहिले कप्तान पारस खड्का र शरद भेषवाकरले समालिरहेका छन् । नेपाली…
नेपालको खराब ब्याटिङ सुरु, १४ रनमा गुम्यो तेस्रो विकेट
२०७४, २९ माघ सोमबार १७:५७ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत केन्याले दिएकोे १७८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टिमलाई तेस्रो झड्का लागेको छ । दिपेन्द्र एेरि खेलको छैटौं अोभरमा मात्र १ रन बनाउदै अाउट भए । यसअघि खेलको दोस्रो अोभरमा नै अाजै डेब्यु…
नेपाललाई दोस्रो झड्का , ज्ञानेन्द्र मल्ल ९ रनमा अाउट
२०७४, २९ माघ सोमबार १७:५० February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत केन्याले दिएकोे १७८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टिमलाई दोस्रो झड्का लागेको छ । चौथो अोभरमा ज्ञानेन्द्र मल्ल ९ रनमा अाउट भएका छन् । यसअघि खेलको दोस्रो अोभरमा नै अाजै डेब्यु गरेका अनिल…
नेपाललाई पहिलो झड्का , डेब्यु ब्याई अनिल सुन्यमा अाउट
२०७४, २९ माघ सोमबार १७:४३ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत केन्याले दिएकोे १७८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टिमलाई पहिलो झड्का लागेको छ । खेलको दोस्रो अोभरमा नै अाजै डेब्यु गरेका अनिल कुमार शाह शून्य रनमा अाउट भए । यो खबर तयार गर्दासम्म…
२०७४, २९ माघ सोमबार १७:२२ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ मा केन्या बिरुद्ध नेपाली स्टार स्पिनर सन्दिप लामिछाने सानदार प्रदर्शन गरेका छन् । खेलमा उनले १० अोभर बलिङ गर्दै ५ मेडन सहित मात्र २० रन दिएर केन्याको पाँच विकेट लिएका छन् । सन्दिपको…
केन्याद्वारा नेपालसामु १७८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत , जित कसको ?
२०७४, २९ माघ सोमबार १६:४७ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत नेपाल बिरुद्ध केन्याले १७८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित ५० अोभरमा अाठ विकेट गुमाउँदै १७७ रन बनायो । योइ पनि हेर्नुस् : केन्या…
केन्या बिरुद्ध सन्दिपले लिए पाँच विकेट , बनाए यस्तो गजवको रेकर्ड
२०७४, २९ माघ सोमबार १६:३४ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
सन्दिपले लिए पाँचौ विकेट , नेपाललाई अाठौ सफलता
२०७४, २९ माघ सोमबार १६:२४ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत महत्वपूर्ण खेलमा अहिले नेपाल र केन्या भिडिरहेका छन् । खेलमा नेपाललाई अाठौ सफलता हात लागेको छ । स्पिनर सन्दिप लामिछानेले ४५ अौ अोभरमा अोडियाम्बोलाई ७ रन मा अाउट गरे । यसअघि पनि…
संकटमा केन्या, शरदले दिलाए सातौ सफलता
२०७४, २९ माघ सोमबार १६:१७ February 12, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ अन्तर्गत महत्वपूर्ण खेलमा अहिले नेपाल र केन्या भिडिरहेका छन् । खेलमा नेपाललाई सातौ सफलता हात लागेको छ । शरद भेषवाकरले ४४ अौ अोभरमा गुरदिप सिहलाई २ रनमा अाउट गरे । यसअघि पनि १९…
Previous 1 … 180 181 182 … 255 Next